योजना तथा शुल्कहरू
आफ्नो लागि सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्नुहोस्!
आफ्नो मासिक खोजी आवश्यकता अनुसार शुल्क लिनुहोस्।
API को सहायताले आफ्नो व्यापार Getcontact सेवाहरूसँग मिलाउनुहोस्।
प्रिमियम योजना भनेको के हो?
प्रिमियम योजनाले Getcontact को विज्ञापनरहित प्रयोग, कसले तपाईंका ट्यागहरू हेरेको छ भन्ने हेर्ने क्षमता, तपाईंको प्रोफाइलमा प्रिमियम ब्याज थप्ने विकल्प र तपाईंको फोन नम्बरको 3-महिनाको खोज तथ्याङ्क अफर गर्छ।
ट्यारिफ भनेको के हो?
ट्यारिफहरू ट्याग र विश्वास स्कोरहरू हेर्ने र फोन नम्बर खोज्ने तपाईंका सीमाहरू वृद्धि गर्नमा तपाईंलाई सक्षम बनाउनका लागि डिजाइन गरिएका हुन्। तपाईं व्यक्तिगत वा कर्पोरेट प्रयोगका लागि डिजाइन गरिएको कुनै पनि ट्यारिफ छान्न सक्नुहुन्छ।
के म आफ्नो योजना परिवर्तन गर्न सक्छु?
तपाईं आफूले चाहेको जुनसुकै समयमा आफ्नो प्रिमियम योजना र ट्यारिफको स्तरवृद्धि गर्न वा स्तर कम गर्न सक्नुहुन्छ।
के म अरू च्यानलहरूबाट प्रिमियम योजना र ट्यारिफहरू खरिद गर्न सक्छु?
सक्नुहुन्न। Getcontact योजनाहरू getcontact.com र हाम्रा आधिकारिक iOS र Android एप्लिकेसनहरूमा मात्र खरिद गर्न सकिन्छ।
के म आफ्नो सदस्यता जुनसुकै समयमा रद्द गर्न सक्छु?
हो, तपाईंले सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो सदस्यता व्यवस्थित गर्न यी चरणहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ: सेटिङहरू > सदस्यता प्याकेज > व्यवस्थित गर्नुहोस्
तपाईं कुन रूपको भुक्तानी स्वीकार्नुहुन्छ?
तपाईं डेबिट कार्डको साथमा सुरक्षित रूपमा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी वैकल्पिक भुक्तानी विधिहरू थप्नका लागि कडा मेहनत गरिरहेका छौँ।
के मेरो कार्डको जानकारी सुरक्षित छ?
हामी कार्डको जानकारीका लागि उच्चतम सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँछौँ। हामी तपाईंको भुक्तानीका सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी भण्डारण वा प्रक्रिया गर्दैनौँ। तपाईंका सबै कारोबार र भुक्तानी जानकारी तेस्रो पक्ष भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूद्वारा इन्क्राइप्ट गरिन्छन्।
मसँग थप प्रश्नहरू भएमा मैले के गर्नुपर्छ?
तपाईं कुनै पनि समयमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं “अन्य” पृष्ठमा फेला पार्न सकिने “हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्” सेक्सनबाट आफ्ना प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं हामीलाई support@getcontact.com मार्फत इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ